Halkalı Xaggiisa Labaad ee Kapıkule Khadadka Tareenka Xawaaraha Sare | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara22 EdirneHalkalı Xaggiisa Labaad ee Kapıkule Xawaaraha Xawaaraha Sare
14 / 02 / 2020 22 Edirne, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Halkali dhanka qandaraaska labaad ee khadka tareenka degdega ah
Dhismuhu wuxuu ka bilaabmay inta u dhexeysa Edirne iyo Havsa Halkalı-Kapikule mashruuc khadka tareenka xawaare sare leh ayaa socda. Cali Ihsan Uygun, Maareeyaha Guud ee Shirkadda TCDD Enterprise, wuxuu booqday khadka khadka shaqooyinka loo qorsheeyay in la dhammeeyo 2024 oo uu helo macluumaad.
SabahSida uu sheegayo warka Murat Savaş; Inta ay ku dhexjirto baaxadda daraasadaha Halkalı-Çerkezköy Waxaa la caddeeyay in howsha ay u socoto qandaraasleyda dhismaha qaybta. Kaas oo yareyn doona waqtiga safarka ee u dhexeeya Istanbul iyo Edirne laga bilaabo 3,5 saac illaa 1 saac 35 daqiiqo Halkalı-Kapikule khadka tareenka xawaare sare ku socda si isdaba joog ah ayuu u socdaa. Hawlaha dhismaha ee khadka ayaa sii socda inta u dhexeysa Edirne iyo Havsa. Baaxadda shaqooyinka socon doona 4 sano, 76 kiilomitir Halkalı-Çerkezköy waxaana la cadeeyay in daraasadahu ay usocdaan hindisada.
Çerkezköy- Horay ayaa loo sheegay in mashruucan, oo qiimahoodu ku yar yahay 530 milyan oo Euro qaybta Kapikule, uu isticmaali doono 275 milyan oo Euros deeqaha EU. Edirne-Havsa baadhaya shaqada dhex maray Jamhuuriyadda Turkey Tareennada State (TCDD) Agaasimaha Guud ee Ganacsiga Ali illayn ku haboon, waana tabar daranyahay ee dhismaha goobta biyaha cusbada (Italy) warbixin ka iskaashi maamulka -Handles helay. Marka laynkan la furi doono, xamuulka iyo dadka waxaa la qaadi doonaa 200km / saacadiiba. Halkalı- Marka la soo bandhigo khadka tareenka ee Kapıkule, marxaladda ugu dambaysa ee isku xidhka shabakadaha gaadiidka-Trans-Europe oo tayo sare leh ayaa la dhammaystiri doonaa.